I-Roblox FPS Unlockers - Ingabe Ivumelekile Ukuyisebenzisa? - Ukudlala
URoblox udlalwa ngokuthandwa ku-inthanethi kanye nenkundla yokwakha umdlalo. Ivumela abasebenzisi bayo ukuthi badlale imidlalo futhi bakhe imidlalo yabo besebenzisa noma yiluphi ulimi oluhlelelwe into. Ngakho-ke, inika abasebenzisi izinketho eziningi zemidlalo abangakhetha kuzo kuwebhusayithi. Bangakwazi dlala imidlalo kudalwe abanye abasebenzisi nemidlalo eyenziwe yithimba lokuthuthukisa eRoblox. Ngenxa yalesi sici esihle sokuvumela abasebenzisi ukuthi basebenzise amakhono abo wokuhlela nokuklama, iRoblox ithathwa njengendlu yabadlali bamageyimu nabadali.
Ukuzijabulisa phakathi kwabadlali be-gamers kuye kwanda, ngenxa kaRoblox. Ngesici sayo sebhokisi lengxoxo eliyimfihlo, abasebenzisi bangaxhumana bodwa. Imidlalo eminingana ingasingathwa kuRoblox futhi ingaqhutshwa cishe kuwo wonke amadivayisi athandwayo nezinkundla ezifana neXBOX One, MAC, Android, njll.
Eminye imidlalo ethandwayo edlalwe kuRoblox ifaka phakathi:
Ukusinda Kwenhlekelele Yemvelo.
Ingqikithi yePark Tycoon 2
Imfihlakalo Yokubulala 2.
Ukusinda Kwebhomu Elikhulu !!
Isivinini Run 4.
Ngabe uRoblox uyayivumela i-FPS unlocker?
Isisebenzi sikaRoblox siqinisekisa ukuthi ngeke kube khona izinyathelo zokulinganisela ezithathwa kulabo abasebenzisa i-FPS unlocker. Futhi, umuntu akakwazi ukuvinjelwa ukusebenzisa iRoblox FPS, inqobo nje uma isemthethweni. U-Adam Miller, i-VP kwa-ROBLOX, usiqinisekisile mathupha isitatimende esingenhla ngesikhathi kunesithangami nabezindaba ngo-2019. Isoftware yokuvula i-FPS evela emithonjeni ethembekile iphephile futhi ayinalo igciwane.
Cabanga nje ukuthi unomqaphi we-144 HZ futhi uqhuba umdlalo kuma-FPS angama-60. Uma ujwayele izilungiselelo zikaRoblox, uzokwazi ukuthi ngokuzenzakalela, imidlalo oyidlalayo ikhawulelwe kuma-FPS angama-60 kuphela. Kubangela ukusilela okuningi. Kuyakhathaza ilungelo? Kuyisizathu esenza ukuthi kuvulwe i-FPS. Ngaphandle kokunikeza umsebenzisi isipiliyoni somdlalo obushelelezi, ukuvula i-FPS kubenza babe ngabadlali abadlala indima futhi abangcono. Inekhathalogi enkulu yemidlalo efanelekile kubadlali abaningi abahlukahlukene. Ukusebenzisa i-FPS unlocker kuzonikeza abasebenzisi umuzwa ongenamthungo wokujabulela imidlalo ezigabeni eziningi. Ngaphandle kwama-lags nokunyakaza okusheshayo, ukuvula i-FPS kwesokudla yikho konke okudingayo.
Izinyathelo Zokulanda i-FPS Unlocker:
Kunezinsizakalo eziningi ze-FPS Unlocker ezitholakala online. Ungabona ushintsho ku-Gameplay yakho kakhulu ngalezi zinsizakalo. Lezi zilungele abasebenzisi abajabulela isikhathi sokudlala esiningi seRoblox. Sincoma ukuthi uzame lokhu ukuthola i-100 + FPS. Lapho i-FPS iba ngcono, i-gameplay ingcono. Nazi ezinye zezinketho eziphezulu ezizokusiza ukuthi ube nokuhlangenwe nakho okubushelelezi.
IGithub iyi-platform yomthombo ovulekile lapho ungachitha khona isikhathi esiningi ufuna amaphrojekthi. Enye yamaphrojekthi abaluleke kakhulu atholakala kuwebhusayithi ukuvula i-Roblox FPS unlocker. Nayi ifayili le- isixhumanisi yesoftware. Esizeni, uzothola izinketho eziningi zokulanda.
I-FPS Unlocker ingalandwa ngqo kusuka kuwebhusayithi. Isixhumanisi siyatholakala lapho, futhi ungasilanda ngezinketho ezingama-32Bit nezingama-64Bit. Amadivayisi amaningi wanamuhla asebenza ekwakhiweni kwezakhiwo ezingama-64Bit.
Khipha ifayela le-RAR kudivayisi yakho ye-PC ukuqala ngenqubo ye-Zip. Abasebenzisi bangasebenzisa. Fayela bese unika amandla ukubhala okuqukethwe kalula.
Voila! Manje unefayela le-FPS Unlocker nedivayisi yakho. Kulula ukugijima futhi akudingi mzamo nhlobo. Abasebenzisi bangajabulela i-gameplay esheshayo ngokusebenzisa leli fayela kumadivayisi abo. Kubushelelezi futhi akuthathi zinsizakusebenza.
Ingabe i-Roblox FPS Unlocker iphephile?
Yize iRoblox iyipulatifomu ethandwa kakhulu yokudlala online, inezingozi ezithile ezihambisana nayo. Nazi ezinye izingqinamba ezihlobene neRoblox:
URoblox unabasebenzisi bayo yonke iminyaka yobudala. Ngenxa yokufinyeleleka kwayo okuthandwayo, akuthathi isikhathi eside ukuthi abasebenzisi bathole okuqukethwe okusha. Amageyimu enziwe ngabasebenzisi abathile angaqukatha okuqukethwe kwabantu abadala, okwenza kungazifaneli izingane. Ngaphezu kwalokho, akukho ukuhlunga okuqukethwe ngokuya ngeminyaka yomsebenzisi.
2. Inketho yengxoxo yangasese
URoblox unenketho yemiyalezo eyimfihlo etholakala kubasebenzisi ngenkathi bedlala umdlalo. Noma yimuphi umlayezo ungaphikisana nenqubomgomo yomphakathi.
3. Ukuxhashazwa ku-inthanethi
Kubonakala kuwusongo lwangempela. Omengameli bagcina isheke ukuqinisekisa ukuthi akwenzeki endaweni yesikhulumi.
4. Amagama wabasebenzisi nosuku lokuzalwa
Kuyalulekwa ukuthi ungasebenzisi igama lakho langempela ngenkathi wenza i-akhawunti. Sebenzisa noma yini yokudala engasondeli eduze negama lakho langempela. Ukusebenzisa igama lakho langempela kunganikeza imininingwane eminingi. Futhi, khumbula ukuthi ukunikeza unyaka ngqo wosuku lwakho lokuzalwa kuyadingeka ukunquma iminyaka. Kepha ungahlala ungeza imininingwane engamanga kuwebhusayithi ukuze uhlale uphephile.
I-Roblox FPS Unlocker iphephe ngokuphelele ukuthi wonke umuntu ayisebenzise. Akudingi ukuthi ungeze noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu. Ifayela futhi liphephe ngokuphelele kunoma imaphi amagciwane. Sincoma ukuthi uzame namuhla uqobo.
Isivuli seRoblox FPS:
Amafreyimu ngomzuzwana (FPS) ichaza ukuthi umdlalo ugijima kahle kanjani kwi-PC yakho. URoblox ukhawulele ukukhonjiswa komdlalo kuma-FPS angama-60 kuphela, okungadala ukubambezeleka ezinhlelweni ezithile.
Ukwehlisa amazinga wozimele kuzonciphisa umdlalo noma kuwenze usale kwesinye isikhathi. Ngakho-ke, lapho inani elikhulu lamafreyimu apakishwe ngomzuzwana, kungcono isipiliyoni. Uma ungumdlali odlala kanzima, ukudlala kumqapha wekhwalithi nge-FPS elungiselelwe kuyadingeka. URoblox akanawo umsebenzi owakhelwe ngaphakathi wokukhulisa i-FPS. Isoftware eyengeziwe yomuntu wesithathu ebizwa nge-FPS unlocker iyadingeka ukukhulisa i-FPS. Ngakho-ke, ngokubona ozimele abaningi esikrinini, sizosabela ngokushesha okukhulu kunoma yiziphi izinguquko ezenzeka endaweni yokudlala.
Kungani usebenzisa i-FPS unlocker?
Isidingo kuphela sokuvula i-FPS ukukhulisa izinga lozimele lomuzwa ongcono wokudlala. Indawo ephendula kakhulu ngaphakathi komdlalo isivumela ukuthi siyibone kangcono futhi siyiyihlaziye kangcono ngesikhathi sangempela. I-FPS ikhubaza ukuvumelanisa kwe-V, okuyikhulisa ngokuzenzekelayo. Ukuvumelanisa i-V ubuchwepheshe behluzo obusetshenziselwa ukuvumelanisa izinga lozimele legeyimu kuya kusilinganiso sokuvuselela somqaphi.
Iletha i-Gameplay ebushelelezi futhi engaphazanyiswa yehluzo noma imidlalo ye-3D. Akuthinti noma kuthuthukise umbala we-PC, ukulungiswa, nokukhanya. Esikhundleni salokho, ixazulula kuphela inkinga ebangelwa isilinganiso sokuqabuleka esiqaphileyo soqapha. Kodwa-ke, uma isilinganiso sozimele segeyimu siphansi kunesilinganiso sokuvuselela somqaphi, khona-ke ukuvumelanisa kwe-V akudingeki ukuthi kuvulwe. Okokugcina, umdlalo uzosebenza kahle ngaphandle kokufakwa kokufaka.
Isivuli seRoblox FPS sizimele ngokuphelele ekusebenziseni kwakho. Ungayisebenzisa namuhla futhi uqinisekise ukuthi uthola insizakalo yekhwalithi ye-premium mahhala. Siyethemba ukuthi umhlahlandlela uzokusiza ekwandiseni ama-Framerates akho. Ilula futhi isebenza kahle kakhulu.
Ibhange Eliyinhloko Lokuqala Ukungenela I-Metaverse ngu-JP Morgan
I-Marvel Comic Nenye Iphrojekthi: Umphindiseli Phakade